Torohevitra 5 hanatsarana ny traikefa amin'ny mailaka fialantsasatra amin'ny 2017 | Martech Zone
Ireo mpiara-miasa aminay 250ok, sehatra fampisehoana mailaka, miaraka amin'ny Hubspot ary MailCharts dia nanome tahirin-kevitra sy fahasamihafana ilaina amin'ny roa taona farany amin'ny angon-drakitra ho an'ny Black Friday sy Cyber ​​Monday.
Mba hanomezana anao ny torohevitra tsara indrindra, Joe Montgomery an'ny 250ok dia niara-niasa tamin'i Courtney Sembler, Profesora Inbox ao amin'ny HubSpot Academy, sy Carl Sednaoui, talen'ny Marketing sy mpiara-manorina ao amin'ny MailCharts. Ny angon-drakitra mailaka tafiditra dia avy amin'ny fandinihan'ny MailCharts ireo mailaka mpivarotra antsinjarany 1000 (IR1000) ambony izay nahatafiditra ny “Zoma Mainty” na “Alatsinain'ny Cyber” amin'ny andalana.
Nanatsoaka hevitra izy ireo fa afaka manatsara ny fandefasana mailaka amin'ny ankapobeny, ny mailaka misokatra ary ny fividianana mailaka amin'ny alàlan'ny fiantohana ireo paikady dimy manaraka apetraka amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity:
Frequency mailaka - Ataovy aloha ny traikefan'ny mpanjifa ary eritrereto ny manontany raha te-hahazo fitomboan'ny volan'ny mailaka mandritra ny fialantsasatra izy ireo. Ny fanaovana izany dia mety hampihena ny lisitry ny fialantsasatra malaza ary hahatonga ny tsy fivadihan'ny marika matanjaka kokoa.
Mandrosoa ny datinao - Fanadihadiana vao haingana nataon'ny RetailMeNot no nitatitra 45% ny mpiantsena mikasa ny hanomboka fiantsenana fialantsasatra alohan'ny volana novambra. Diniho ny fanitarana ny sidina fampielezan-kevitra amin'ny lafiny roa; manomboka aloha, mihazakazaka lava.
Tsara kokoa ny famolavolana - Ny sary matanjaka miaraka amin'ny CTA mazava dia lakilen'ny mailaka miova. Ho fanampin'izany, alao antoka fa mandeha amin'ny alàlan'ny sehatra sy fitaovana rehetra ampiasain'ny mpanjifanao ny mailaka alohan'ny handefasanao.
fanamarinana - Araka ny tatitra an-tserasera Online Trust Alliance navoaka tamin'ny Jona 2017, ny antsasaky ny mpivarotra antsinjarany 100 ambony, ary ny ampahatelon'ny 500 ambony indrindra dia tsy manana fanamarinana mailaka sy fiarovana azo antoka. Aza avela phishing manimba ny fialantsasatra ny fanafihana.
Miantsoa hanao asa - Angataho ny mpanjifa hanisy izay tian'izy ireo hovidiana aminao amin'ny saretiny - hampihena ny fifandirana izany mandritra ny zoma mainty zoma / cyber Monday. Amporisiho ny mpanjifa miaraka amin'ny entana ao anaty kalesiny hijerena vola mba hitakiana ny fihenam-bidy na tolotra omenao.
Ity ny infographic feno, Zoma Mainty ary Cyber ​​Monday Inbox Experience.
Tags: 250okfanamarinanablack fridaymiantso amin'ny asacyber mondaymailakafanamarinana mailakamailaka mailakafamolavolana mailakatraikefa inboxmpivarotra an-tseraseratabilao mailaka